Umhlahlandlela womdlalo i-SCRATCH CARD 2022 - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / Imihlahlandlela / umhlahlandlela womdlalo i-scratch card
Umhlahlandlela womdlalo i-SCRATCH CARD
Uyemukelwa kumhlahlandlela wethu wegeyimu we-Scratch Cards lapho sizobheka khona imithetho eyisisekelo yomdlalo nokuthi ungaqala kanjani uma ungakaze udlale umdlalo we-Scratch Card. Akunzima ukudlala amakhadi we-Scracth Card kodwa sikwazile ukuhlanganisa izeluleko ezimbalwa ezizokusiza ukukukhomba lapho kufanele khona. Lezi zeluleko zingakusiza ukunqoba okukhulu!
Nawa amathiphu ethu we-TOP 10 Scratch Cards:
1. Khetha ukuthi ufuna ukusebenzisa malini ekuqaleni amakhadi ngeviki noma ngenyanga bese unamathela kuleyo mali.
2. Umqondo oyinhloko ngemuva kwamakhadi okuqala ukuzithokozisa, ungawathengi uma uphelelwe yithemba.
3. Dlala amakhadi we-Scratch Card ngemali ongakwazi ukuyilahlekelwa, bese ukhetha kuphela labo abasesilinganisweni sakho sebhajethi.
4. Kungumqondo omuhle ukuqala ngokudlala i-scratch card entsha kwimodi yokudlala yamahhala. Ngaleyo ndlela ungaqala ufunde imithetho bese unquma ukuthi uyawuthanda yini umdlalo ngaphambi kokusebenzisa imali yakho oyisebenzele kanzima kuwo.
5. Khumbula ukuthi abaphumelele bayazi ukuthi kufanele bayeke nini, futhi bayazi ukuthi isikhathi esihle sokwenza lokhu kulapho besengaphambili. Ngemuva kwalokho kufanele ugcine ama-winnings akho noma uwubekele eceleni isikhathi sakho esilandelayo sokugembula.
6. Uma uqhubeka nokuhlulwa, yeka ukudlala izinsuku ezimbalwa, uze uzizwe unenhlanhla. Abadlali abaphelelwe yithemba abavamise ukuwina neze futhi akufanele neze ulalndele ukuhlulwa kwakho.
7. Ungadlali njalo amakhadi weJjackpot amakhulu. Uzibeke ethubeni lokuwina imali eningi kepha khumbula ukuthi abantu abaningi bazobamba iqhaza, okusho ukuthi amathuba okuwina kwakho azobe ephansi.
8. Yize kulungile ukudlala imidlalo lapho uphuze isiphuzo esisodwa noma ezimbili, akufanele neze udlale ama-scratch card noma udlale noma yimiphi imidlalo yokugembula lapho udakiwe. Isahlulelo sakho sizokhubazeka futhi kunethuba elikhulu lokuthi uzolahlekelwa yiyo yonke imali yakho.
9. Ungayiphinda kabili imali yakho ngamasayithi emidlalo yamakhadi aku-inthanethi anikezela ngebhonasi efanayo engu-100%.
10. Zama njalo ukonga okunye okuwinile, hhayi ukuthi ukusebenzise konke ukudlala imidlalo eminingi yamakhadi.
Chofoza i-SRACTHCARD ESINGENZANSI UKWAZI UKUTHOLA UMKLOMELO WE-£25 WAMHHALA @ WINNER GAMES
Dlala i-Spider-Man Scratch card
Dlala i-Dare Devil-Scratch card
Dlala i-Wolverine-Scratch card
Dlala i-Gladiator-Scratch card
Dlala i-Iron Man- Scratch card
Dlala i-Winners Club-Scratch card